Arsenal Oo Madax Xanuun Ku Bilaaban Doonta Horyaalka Premier League Xili Ciyaareedka Soo Socda | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Arsenal Oo Madax Xanuun Ku Bilaaban Doonta Horyaalka Premier League Xili Ciyaareedka Soo Socda
(14-6-2018) Tababaraha cusub ee kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa isla markiiba mari doona imtixaan aad u adag ee waayiisa cusub ee Premier league kadib markii la soo saaray jadwalka isku aadka horyaalka Premier league ee xili ciyaareedka cusub ee 2018/19. Unai Emery ayaa loo gacan galiyay bilaabasho adag oo ciqaab wayn ah.
Unai Emery ayaa waayihiisa tababaranimo ee Arsenal gaar ahaan horyaalka Premier league ku bilaaban doona laba kulan oo aad u adag isaga oo kulankiisa ugu horeeyay ee Premier League si toos ah u qaabili doona macalinka ay isku dalka Spain ka soo jeedaan ee Pep Guardiola markaas oo ay Man City soo booqan doonto Emirates Stadium.
Inkasta oo kooxaha Manchester City iyo Arsenal ay labadaba u tahay maalin furitaan oo aad u adag, haddana in Unai Emery uu kulankiisii ugu horeeyay noqday mid uu Manchester City kaga hor imanayo ayaan ahayn soo dhawayn fiican oo uu Premier league kala kulmi doono.
Arsenal ayaan wax guul ah ka soo gaadhin Manchester City shantii kulan ee Premier league ugu danbeeyay iyada oo 3 guuldaro Gunners la soo kulantay halka labada kulan ee kale ay barbaro ku dhamaadeen laakiin waxaaba ka sii xun in Gunners ay 2 kulan oo kaliya ka soo guulaysatay 12 kii kulan ee Premier league ugu danbeeyay ee ay City la soo ciyartay.
Rekoodhkan aadka u liita ee Arsenal ka haysato Manchester City waxaa kulankiisii ugu horeeyay looga dhigay Unai Emery oo bilawga xili ciyaareedka cusub indhaha ku kala furan doona Emirates Stadium marka ay Man City soo dhaweeyaan.
Laakiin Unai Emrey waxaa kaga daran in kulankiisa labaad ee Premier League uu isna noqon doono mid aan ka hoosayn kulanka Man City waxayna Gunners u safri doontaa garoonka ay natiijooyinka aadka u liita ka soo helaysay ee Stamford Bridge.
Arsenal ayaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay kaalinta lixaad kaga dhamaysatay Premier League iyada oo waliba ka maqan UEFA Champions League laakiin Unai Emery oo laba kulan oo ciqaab ah loogu furi doono Premier League ayaa la doonayaa in uu kooxda isbadal wayn ka sameeyo.
Sidaa daraadeed, labada kulan ee ugu horeeya waayaha Unai Emery ee Arsenal ayaaba noqon kara kuwa ay markiiba jamaahiirta kooxdiisa Arsenal ku ogaan karaan awoodiisa tababaranimo iyo haddii ay wax wayn ka filan karaan.
Kulamada Uu Unai Emery Ku Furan Doono Waayihiisa Cusub ee Premier league: